Kismaayo News » Somaliland oo weerartay Puntland
Somaliland oo weerartay Puntland
Kn: Ciidamada Somaliland ayaa saaka weerar ku qaaday bar kantarool oo gaadiidka lagu baaro oo ku taalay meel u dhaxaysa magaalada Laascaanood iyo Tuke-raq taasi ooy maamulayeen Puntland.
Ciidamada Somaliland oon la kulmin wax iska caabin ah ayaa sida la sheegayo gaaray tuulada Bohol-waraabe oo kaabiga ku haysa magaalada Tuke-raq. Weerarka ay Somaliland ku qaaday Puntland ayaa ku soo aadaya xili madaxweynaha Soomaaliya uu ku suganyahay magaalada Garoowe. Ciidamada Puntland ayaa xooggoodu ku maqanyihiin hawlgalka Buuraha Galgala halka qayb kalana ay ku mashquulsantahay sugista amaanka Garoowe oo ay ku suganyihiin wafuud uu kamidyahay Farmaajo iyo dublumaasiyiin kale.
Waxaa xusid mudan in ciidamada weerarka ku qaaday deegaamada hoos taga Tuke-raq iyo kuwa maamulayayba ay ahaayeen isku beel laakiin kala taabacsan maamullada Somaliland iyo Puntland. Sidoo kale ma aha markii koobaad ee sidan oo kale ay labada dhinac u kala qabsadaan deegaamadan ee waa wax caadi iska noqday inay gacan kuhaynta deegaamadani isbadbadasho.
Madaxweynaha Somaliland ayaa socdaal ugu maqan dalka Jabuuti, halka madaxweha Puntland uu ku hawlanyahay maamuuska madaxda martida u ah. Majiro wax war ah oo labada dhinac ka soo baxay marka laga reebo saraakiil meeqaam hoose ah oo saxaafadda siiyay warar kalagadisan.